Havagoni kuchinja Radio (NAV1) musi Air France Airbus 380
mubvunzo Havagoni kuchinja Radio (NAV1) musi Air France Airbus 380
1 gore 11 ago #442 by spilok
Ndakaedza zvose, asi handigoni kushandura redhiyo (NAV1) kakawanda musi Air France Airbus 380. Ndinofarira ndege asi pasina kwandiri kana Handikwanisi kushandura redhiyo frequencies.
Chii chakavanzika? Please kubatsira.
1 gore 11 ago #443 by Dariussssss
Same pano ... Chokwadi, zvose PA A380s vane kuti dambudziko.
Pamwe, kana pane nzira kutsiva redhiyo kana chero chinhu, pamwe chete kubva Boeing yaizobatsira, asi musafunga kuti zvinobvira. Ndinorangarira, muna FS2004 kuti zvaigoneka.
1 gore 11 ago #444 by Dariussssss
Ndakakwanisa kuchigadzira. Zvaunongoda rako default A321.
Enda kuna A321,
pachena Panel forodha,
tsvaka wovhura panel.cfg faira,
kutevedzera mitsetse izvi:
(Chete yechitema ndivo), regai kutevedzera kuti Window01, zvinogona sikuruwa yako A380 remadziro.
Enda A380 wako,
Panel.cfg faira yakazaruka,
tsvaka uye kutsiva vose mitsetse vari Radio.
Kuedzwa maminitsi mashomanana vanoenda, uye akaita chakanaka kumhara.
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: spilok, Gh0stRider203, Geniousabhishe1
1 gore 11 ago #445 by Gh0stRider203
Hamufaniri ndazviwanira ari vakatuma dzemari ....
Radios pamusoro Airbus chinhu Opsioneel kuchiitwa. Kinda kufanana blinkers pamusoro BMW
1 gore 11 ago #446 by Dariussssss
Time chokusika peji: 0.230 mumasekonzi